နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်ရုပ်ရှင် > စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်ကိုလည်းပလပ်စတစ်ဖန်လုံအိမ်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဖန်လုံအိမ်ဘောင်သည်သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ၀ ါးနှင့်သစ်၊ သို့မဟုတ်ဘိလပ်မြေအစရှိသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်သည်စိုက်ပျိုးရေးတွင်စိုက်ပျိုးသည်။ ဥပမာဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီး၊ ပန်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂) အမြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂) အလင်းရောင်မြင့်မားစွာထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်ကောင်းမွန်သည်3) ရာသီမတိုင်မီဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း (၄) ။
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် is also called plastic greenhouse ,often use circular arch , single span or multi-span. The greenhouse frame can use steel structure,bamboo and wood,or cement column,etc.The film greenhouse is often used for agricultural growing,for example vegetables,fruit,flower etc.It is the most economical way of planting for farmers.
1) .low ကုန်ကျစရိတ်, အမြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု
၂) အလင်းရရှိမှုမြင့်မား။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်ကောင်းမွန်သည်
5) .easy ဆောက်လုပ်ရေး, အနိမ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
2.Product Parameter (Specification) of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် widely application forခရမ်းချဉ်သီးဆလတ်ကဲ့သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ စတော်ဘယ်ရီကဲ့သို့အသီးများ၊ ငါးမွေးမြူခြင်းနှင့်အခြားအရာများ။
၁။ ချွေတာသောဖန်လုံအိမ်၊ လှပသော arc နှင့်တန်ဖိုးနည်းသောအသုံးပြုသူများသည်ရေပန်းစားသည်။
၂) arc-shaped ခေါင်မိုးသည်လှပပြီးကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။
The main body of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် is simple and practical. Its cost is low and operation cost is low. It is suitable for the north area. Double arch and double film is adopted for the top so that it can prevent heat loss and cold air invasion effectively. Furthermore, its insulation effect is good and operation cost in winter is low. Polycarbonate plate, float glass and film (single layer, double layer) can be selected as covering of the periphery.
ပလပ်စတစ်သွန်းလောင်းသည်အကာအကွယ်ပေးသောဟော်ရီကာချာလယ်ကွင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာစီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်။
Frame of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
â€ roll ပြီးပြည့်စုံသောလိပ်တက်နှင့်ကျဆင်းမှုများအတွက်ချောမွေ့နှင့်ဖြောင့်။
- ဒေါင်လိုက်ဆန့်ကျင်သောပိုက်များ၊ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်များအတွက် purlins နှင့်အရိပ်ဘောင်များတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
âရရှိနိုင်တ ဦး တည်းအဆုံးသတ်သို့မဟုတ်လွင်ပြင်ကြီးစွန်းမှာ swaged ။
နှစ်ထပ် Arch နှင့်နှစ်ဆရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ထိပ်များအတွက်မွေးစားသည်။ အရံပစ္စည်းအတွက်နှစ်ချက်ဖလင်၊ တစ်ခုတည်းသောရုပ်ရှင်၊ ပီစီစာရွက်သို့မဟုတ်အခြားဖုံးအုပ်ထားသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းareaရိယာတွင်နှစ်ဆသောအဖုံးများကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ခုတည်းသောအဖုံးကိုတောင်ပိုင်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် offer all the system for climate control. We can offer and design according to local climate details and စိတ်ကြိုက် requirement, like Ventilation, Cooling, Irrigation, Growing, Shading, Heating, Circulation... systems.
Ventilation System of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
၁) ။ အအေးပေးသည့်လျှပ်စစ်ခေါင်မိုး၊
2) ။ ဘေးထွက်မြို့ရိုးကိုမော်တာ drive ကိုပိတ်ဆို့
Cooling System of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
၁) ။ အလူမီနီယံဘောင်နှင့်အတူအအေး pad; ရေသံသရာ;
2) ။ အိပ်ဇောပန်ကာ
Electrical Cabinet of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
growing ကြီးထွားလာနေသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည်။
our ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများဖြင့်သင်၏အပင်များ၊ ပန်းများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းပါ။
Growing System of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
Hydroponic စိုက်ပျိုးမှုသည်အပင်များ၏အမြစ်များကိုအလွှာစိုက်ပျိုးခြင်းမပါဘဲတိုက်ရိုက်အပင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံး Hydroponics သည်အာဟာရရုပ်ရှင်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ - ကောက်ပဲသီးနှံအမြစ်မှတစ်ဆင့်အလွန်ပါးလွှာသောအလွှာ (0.5-1.0cm) သံသရာကိုပြုလုပ်ပါ။ ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်ရေနှင့်အာဟာရပြည့်ဝစေရန်ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမကအမြစ်အတွက်အောက်စီဂျင်လတ်ဆတ်မှုကိုပါထောက်ပံ့ပေးသည်။ NFT စိုက်ပျိုးနည်းသည်ဆည်မြောင်းနည်းပညာကိုများစွာရိုးရှင်းစေပြီးသီးနှံရေလိုအပ်ချက်ကိုနေ့စဉ်တွက်ချက်ရန်မလိုဘဲအာဟာရမျှတမှုရှိစေရေးကိုသေချာစေသည်။
၁) ။ Hydroponics ကြီးထွားမှုစနစ်
2) ။ Ebb- စီးဆင်းမှုအိပ်ရာစနစ်
၃) Seedbed စနစ်
Shading System of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
â€¢အရိပ်အထည်ကိုသိုးမွှေးထိုးထားသော polyethylene ထည်မှထုတ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ပုပ်ခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း၊
●သင်၏တိကျသောလျှောက်လွှာနှင့်ကိုက်ညီရန်အရိပ်သိပ်သည်းမှု ၃၀% မှ ၈၀% အထိရရှိသည်။
sizes အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရိပ်များသည်ကြာရှည်ခံသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်၊ အလင်းပျံ့နှံ့မှုကိုတိုးတက်စေသည်၊ အပူကိုထင်ဟပ်စေပြီးဖန်လုံအိမ်များကိုအေးစေသည်။
၁) ။ လက်စွဲသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မော်တာစနစ်ဖြင့်အတွင်းပိုင်း shading စနစ်
2) ။ အပြင်ဘက် shading စနစ်
Irrigation System, Heating System of စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
၁) ။ ဘွိုင်လာအပူပေးစနစ်
2) ။ လေပူမှုတ်စက်များ
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ် SGS လက်မှတ်နှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ်
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် delivery by container in bulk, we always delivery on time to meet our client requirements.
စိုက်ပျိုးရေးတရုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဖန်လုံအိမ် from Jianda Greenhouse Company Welcome to our factory to haveavisit and any inquiry.
Q:အဘယ်ကြောင့် JIANDA ဖန်လုံအိမ်စီးရီးကိုရွေးပါ?
A: JIANDA ဖန်လုံအိမ်သည်စစ်မှန်သောထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမဆိုသင့်အားစက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်ချက်ချင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အာမခံပေးနိုင်သည်။ ၁၅ နှစ်ကြာ R&D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများ ရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန် / pc ပိုလီကာဗွန်နိတ်စာရွက် / ဖလင်နှစ်ပြားကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အခြားဖုံးအုပ်ပစ္စည်းဖန်လုံအိမ်။ ဖန်လုံအိမ်လှလှပပတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုသင့်အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများမှာ!
A:ကျွန်ုပ်တို့၏အရိုးစုသည်အရည်အသွေးမြင့်သောအပူနှစ်မြှုပ်သည့်သံမဏိအပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဂဟေနှင့်ဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးအရည်အသွေးအား ၂၅ နှစ်အာမခံသည်။ အနှစ် ၂၀ အတွင်းအလိုအလျှောက်သံချေးမတက်ပါ။ နေဘုတ်၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ် ၁၂ နှစ်။
A: က T / T သို့မဟုတ် L / C, များသောအားဖြင့်ကက်ဘိနက်ပေးပို့ချိန်တစ်ခုလုံးအတွက်ရက် ၃၀ မှ ၃၅ ရက်။
1) .Max လေတိုက်နှုန်း။
2) နွေရာသီ .Max အပူချိန်နှင့်ပျမ်းမျှအပူချိန်။
၆။ အပင်များကိုမြေပြင်ပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ Hydroponic စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေစိုက်ပျိုးပါ။
၇။ သင်တည်ဆောက်လိုသောဖန်လုံအိမ်၏စတုရန်းမီတာ (သို့မဟုတ်) စတုရန်းပေမည်။
၈) AC သို့မဟုတ် DC Power Voltage, Hz နှင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ။